ပထမဆုံးအပိုင်းနဲ့တင် ပရိသတ်ကို အူတက်စေခဲ့တဲ့ Mr. Queen ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ Cameo အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့Zombie Detective ထဲက BB cream လိမ်းတဲ့ ဇွန်ဘီလေး Jang Bong Hwan - Chelmo News Portal
Home›Exclusive›ပထမဆုံးအပိုင်းနဲ့တင် ပရိသတ်ကို အူတက်စေခဲ့တဲ့ Mr. Queen ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ Cameo အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့Zombie Detective ထဲက BB cream လိမ်းတဲ့ ဇွန်ဘီလေး Jang Bong Hwan
Mr. Queen ဇာတ်လမ်းတွဲ ကတော့ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ရက် နေ့မှစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ဟာသမြောက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ဇာတ်အိမ်ခိုင်မာပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Mr. Queen ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ tvN ကလွှင့်တဲ့ Weekend drama သမိုင်းမှာဒုတိယအမြင့်ဆုံး Rating ရရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမယ့်လည်း နန်းတွင်းအကြောင်းကို ရိုက်ကူးရာမှာ ဟာသဆန်တဲ့ တချို့ဇာတ်ကွက်တွေက သမိုင်းကြောင်းကိုစော်ကားတယ်ဆိုပြီး တောင်ကိုရီးယားပရိသတ်တွေက ဝေဖန်ခဲ့တာကြောင့် ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့က တောင်းပန်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတအိမ်ပြာတော်မှာ အသက်အငယ်ဆုံးနဲ့ အတော်ဆုံး စားဖိုမှူးဖြစ်တဲ့ Jang Bong Hwan(Choi Jin Hyuk) ဟာမနာလိုသူတွေရဲ့ ချောက်တွန်းမှုကြောင့် သံသယရှိသူအဖြစ်လိုက်လံဖမ်းဆီးခံရပြီး ထွက်ပြေးရာမှ အထပ်မြင့်တိုက်ပေါ်ကနေ ရေကူးကန်ထဲကို ပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ရေနစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရှေးခေတ်ဝတ်စုံနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူကိုနမ်းလိုက်တာကိုနောက်ဆုံးမှတ်မိလိုက်ပြီးတော့ သတိရလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူဝိဉာဉ်က အမျိုးသမီးကိုယ်ထဲမှာပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာ ဂျိုဆွန်ခေတ်က ဘုရင့်မိဖုရားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သူဟာ လက်ရှိခေတ်ကိုပြန်သွားဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပေမယ့်မရတဲ့အဆုံးမှာ ဂျိုဆွန်ခေတ် မိဖုရားခေါင်ကြီးအဖြစ် ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ နန်းတွင်းအရေးတွေကြားမှာ အသက်ရှင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူသမိုင်းထဲမှာသင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ခပ်တုံးတုံးနဲ့မိန်းမပွေတဲ့ ဘုရင်ကရော သူထင်ထားသလို တကယ်ပဲ တုံးအတဲ့ ဘုရင်တစ်ယောက်လား?သမိုင်းထဲမှာကျက်ထားခဲ့သမျှ အချက်အလက်တွေနဲ့ ခေတ်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကနန်းတွင်းအရှုပ်တော်ပုံတွေထဲမှာ လိုက်လျောညီထွေအောင်နေထိုင်ဖို့ လုံလောက်ရဲ့လား? ဂျိုဆွန်းခေတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရည်းစားရှုပ်မိန်းမပွေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့နေထိုင်မှာလဲ?
King Cheoljong အဖြစ် Kim Jung Hyun နဲ့ မိဖုရား Kim So Young အဖြစ် Shin Hye Sun တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပြီး မင်းကြီး King Cheoljong အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Kim Jung-Hyunကတော့ သူရဲ့ drama ကကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်တွေကို ပြုံးပျော်စေနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။Mr. Queen ဟာ သဘာဝလွန် အချိန်ခရီးသွားနန်းတွင်းဇာတ်လမ်းတွဲမျိုးဖြစ်ပြီး သာမာန်ကြည့်နေကျ နန်းတွင်းဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့မတူတဲ့ အရသာမျိုးခံစားရမှာပါ။အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ခွဲခြားထားတဲ့ ခေတ်ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို အမျိုးသမီးကိုယ်ထဲဝင်ရောက်သွားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အမြင်ကနေ အရင်ကထက်ပိုပြီး သိသိသာသာ ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ မြင်ရမှာလည်းဖြစ်ပြီးဒိုင်ယာလော့တစ်ကြောင်းချင်းစီကအစ အူနှိပ်ပြီးရယ်နေရမှာအမှန်ပါပဲ။
Tags#Chelmo #ChelmoTeam #Mr.Queen
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Lisa ရဲ့ အမိုက်စား Airport Fashion ...
(၂၀၂၁)ခုနှစ်မှာ အသက် ၄၀ ပြည့်ကြတော့မယ့် ကိုရီးယားမင်းသမီး ၇ ယောက်
Ji Chang Wook နဲ့ Kim Jiwon တို့ရဲ့ ‘Lovestruck in the City’ Drama မှာပါဝင်လာမယ့် SHINee MINHO